Puntland oo amar culus dul dhigtay Ajaanibta ka howlgasha deegaanadeeda. | XAL DOON
Home NEWS Puntland oo amar culus dul dhigtay Ajaanibta ka howlgasha deegaanadeeda.
Puntland oo amar culus dul dhigtay Ajaanibta ka howlgasha deegaanadeeda.
Maamulka Puntland, ayaa soo saaray digreeto uu amarro culus ku dul dhiggayo mas’uuliyiinta hay’adaha iyo Shirkadaha Caalamiga ah ee ka howlgalla deegaanada Puntland, taasoo daaran habka ay u shaqeeyaan.
Agaasimaha guud ee Wasaaradda shaqada, shaqaalaha, dhalinyarada iyo ciyaaraha Puntland, Axmed Maxamuud Cabdalle (Tigaana), ayaa sheegay ineysana Aqbaleynin in dad Ajaanib ah laga shaqaaleysiiyo deegaanadooda, iyadoo ay shaqa la’aan dalka isaga cararayaan dhalinyarada Soomaaliyeed.
Waxa uu tilmaamay sidoo kale iney kala xadeynayaan habka ay isula macaamilaan loo shaqeeyaha iyo shaqalaaha oo mararka qaar dhibaato isku qaba, iyagoo shaaciyay inaan shaqaale shaqada laga saari karin ogeysiis la’aantooda.
Digreetada ka soo baxday maamulka Puntland, ayaa lagu amray dhammaan shirkadaha iyo hay’adaha maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah in ay xogta shaqaalahooda oo faahfaahsan ku soo gudbiyaan mudda bil ah, si loo ilaaliyo habsami-usocodka shaqada.
Halkan Hoose ka Aqrsio Digreetada maamulka Puntland: